Iingoma ezilishumi eziphezulu zeBrost Bob Bobley
Iingoma ezi-10 ezilungileyo zeCrostest Songs Bob Bobley
"Sukumela amalungelo akho!"
Umlingo weRegae uBob Marley wabhala waza wabhala iingoma malunga nazo zonke iintlobo zezinto, ukusuka kwiingoma zomculo ukuya kwiingoma zomdaniso wokudansa, kodwa mhlawumbi uyaziwa kakhulu kwiingoma zakhe zezopolitiko kunye nezobhikisha. Zivela kwizinto zokomoya ukuya kwintlonelo, kodwa zonke ziphethe umxholo ofanayo: ukuchithwa kweBhabheli (ngokukodwa, inkcubeko ecindezelayo yabaMhlophe baseYurophu kunye namaMelika) "yixinzelelo" (igama elithi Rastafarian "elixinezelekileyo"), kwaye ngokubanzi , ukuphela kobukhoboka, ubuhlwempu obukhulu, kunye nokuxhaphazwa kwabo bonke abahluphekileyo. Abaprotheli behlabathi lonke baye bafumana ukudibanisa nale ngoma kunye nemiyalezo yabo njengoko bebhaliwe kuqala, kwaye bahlala befanelekileyo namhlanje njengokuba bebekhona.
"Ngamanye amaxesha unako ukukhohlisa abantu, kodwa awukwazi ukukhohlisa bonke abantu ngexesha lonke ngoku ngoku sibona ukukhanya! Siya kumela amalungelo ethu!"
Ebhalwa nguBob Marley kunye noPeter Tosh ngo-1973, "Hlakani, Hlalani" nenye yeyona nto inkulu kakhulu (kwaye ithandwa kakhulu) iingoma zokubhikisha ngazo zonke ixesha, kwaye yinto ethandwa ngokukhethekileyo-kunye nombolo yokubhikisha, imiboniso kunye nokuhamba . Akunjalo kuphela kumyalezo weentlobo ezininzi zeembambano ezinomdla, kulula ukucula, ngubani-onokuthetha-ne-chorus, kodwa unomdla wokumculo, ngokunjalo: ukuhambelana komculo kunokuba nekrele elilodwa (I- Bm ibonakala iyathandwa), ngoko-ke umdlali wegitala onokonakalayo unokuyilawula.
"Ukuba ungumthi omkhulu, sinesika esincinci, silungele ukunqumla, ukukunqumla!"
Le ngoma ichaza ngokucacileyo njengoko iifowuni zifumana: amalungisa abantu abancinci baya, ngokuthe ngcembe kodwa ngokuqinisekileyo, bathathe izinto ezimbi. Ukubakho kakhulu kwiingxelo zeBhayibhile, "I-Ax encinci" inemvakalelo enzulu kunye neyobuhlungu kwaye ibonisa isakhelo esingokomoya esisisiseko senkxaso yezopolitiko zikaMarley.
"Emancipate ngokwakho ebugqilini bengqondo, akukho nto ngaphandle kwethu inokukhulula iingqondo zethu."
Le ngoma, enye yeyona nto inhle kakhulu kuMarley (kunye neyona nto igqityiweyo ), ngumzekelo ongaqhelekanga kaBol Marley ukurekhoda yedwa, kunye nezwi lakhe kunye negarari. Ngamazwi athatyathwa kwinxalenye yentetho kaMarcus Garvey kunye nokwenza ingxoxo yokuba ubukhoboka abuzange bupheliswe ngokupheleleyo (buya kutshintsha nje), luyingxenye enamandla yomculo kunye nezibongo.
"Kuze kube yilapho ifilosofi ethatha olunye uhlanga oluphezulu kunye nolunye olungaphantsi lugqitywa kwaye luye lwashiywa ngokusisigxina, yonke indawo imfazwe, ndithi imfazwe."
Akukho mbuzo malunga nokubhikisha kukaMarley ngokuthi "iMfazwe": umyalezo ocacileyo nolungabonakaliyo ngokuchasene nobuhlanga, ubuhlanga kunye nobuhlwempu. Amazwi, athathwe kwinkulumo ka-1963 eyanikwa nguMlawuli waseTopiya uAi Haile Selassie, uthetha ngokuthe ngqo kwiinkathazo e-Afrika (ezininzi zazo zihlala zingagqitywanga), kodwa ngokubanzi ngokubanzi malunga nemiba efanayo kwihlabathi.
"Kuthatha inguqulelo ukwenza isisombululo, ukudideka kakhulu, ukukhungatheka okukhulu!"
Lo mzila wokuvala we-albhamu enkulu yezopolitiko uNatty Dread ngumnxeba ogqithisileyo kwaye onqabileyo-yintoni enye? - inguqulelo. Ngomculo, kunzima kakhulu kunezinye iingoma kuloluhlu, kodwa amazwi anamandla kwaye anamandla.
"Kulungile, kubonakala ngathi ukutshatyalaliswa ngokupheleleyo kukuphela kwesisombululo, kwaye akukho nto ayisebenzisayo - akukho mntu unokuwavimba ngoku!"
Ukuba uphulaphule le ngoma ngaphandle kokunikela ingqalelo kwiingoma, mhlawumbi ucinga ukuba yayiyinombolo evuyokileyo, inamba yokunyusa, kodwa ngokwenene, enye yezinto ezigqithiseleyo kunye nee-anarchic ezenziwe nguBol Marley. "Imeko yangempela" ibeka ukuba oorhulumente behlabathi kunye neklasi yokulawula bayonakele kangangokuthi into eyona nto yokwenza iwahlula onke amandla kwaye aqale kwakhona, kodwa isandi esilungileyo saloo mculo sikhokelela ekubeni ukholwe ukuba ukutshatyalaliswa okukhankanywe amazwi ayenokuba yinto evuyayo.
"Ngoko ingalo ezandleni, ngeengalo, siza kulwa nomzabalazo omncinci, kuba yindlela ephela yendlela esinokuyinqoba ngayo ingxaki yethu."
"I-Zimbabwe" yenye yeengoma ezinqabileyo ze-Afrika eziqhankqalazayo ezibhekiswe nguBob Marley. Ekhutshwa ngo-1979, xa i- Zimbabwe yayisabizwa ngokuthi iRhodesi kwaye ilawulwa yincinci encinane emhlophe, le ngoma ingumqobo ngokubhena kwizandla zabamnyama baseZimbabwe, kubakhuthaza ukuba bayichithe urhulumente wabo. Enyanisweni, bawubhubhise urhulumente wabo, kwaye enye entsha, phantsi kolawulo lukaRobert Mugabe onokungabonakaliyo. UMarley wenziwa kwikhonsathi yokubhiyozela, kunye nomxholo weZimbabwe uThomas Mapfumo, phakathi kwabanye.
"Izalwane lizele, kodwa silambile!
Nangona le ngoma isilumkisa ngesihlwele esikrakra, ikwabonisa ukuba umculo kunye nokudanisa kukuphunyuka kakuhle kwiinkxwaleko zentlupheko. Ngaloo ndlela, ityhuqa impumlo yayo kwi "abaxhasi" xa ikhuthaza ukunyaniseka "kwi-downpressed". UMarley waqala ukukhupha le ngoma kuNatty Dread , kodwa wayenza ngokubakho khondi rhoqo de wafa, kubandakanywa ingqungquthela yokuvusa ingqungquthela yakhe yokugqibela, eyayingenakuguquka njenge Bob Marley kunye ne-Wailers Live Forever .
"Kufuneka siwele ngaphi imilambo ngaphambi kokuba sikwazi ukuthetha nomphathi? Konke esinakho, kubonakala ngathi silahlekile.
Mhlawumbi inkulu kunoma yiphi ingoma uBol Marley abhala ngayo, le ngoma yokuqhankqalaza ixoxa ngokusasaza; akunjalo ngokusuka kwimbono yokukhuthaza ukunyelisa, kodwa ukuthetha nje malunga nokuba umphumo wendalo kunye ne-autrasiyali igonyamelo. Nangona mhlawumbi kungekona ukhetho lokuqala loluhlu lwabadlali be-protester olungenayo i- nonololent , luyingxenye ebalulekileyo ye-canon Bob Bobley.
"Amadoda abona amaphupha abo kunye nokufuna kwabo ukunyuka phambi kobuso babo, kunye nenjongo yabo engendawo yokutshabalalisa uluntu."
"Ching Down Babylon" luhlobo lwengoma ye-meta-ingqungquthela - ingoma ngokwayo ingoma iingoma zokuqhankqalaza kunye nendlela iingqungquthela eziza kuzisa ngayo iBhabheli. Ngokwenziwe ngokucacileyo, nangona kunjalo, kuyinto engummangaliso yokucula kunye kwaye, nangona u-Rastafarian overtones, akusiyo loo myalezo-ngqo ukuba ayikwazi ukusetyenziswa kwiintlobo ezininzi zeembambano.
Ama-albhamu aMahle aphezulu e-2010
Iingoma eziphezulu ze-Rap Rap zika-2006
Ukuphononongwa kwePhepha leTI
Top 10 Rockabilly Songs
Iingoma eziMculo eziMculo eziphezulu ze-2007
Top 10 Tony Bennett Iingoma
I-Top 100 Country Iingoma zama-1990s-Icandelo 5
Iingoma ezilishumi eziphezulu zeJunior Brown Songs
I-10 e-Best Best Rappers engekho igama elingu-Eminem
Eyona ndlela ihamba phambili yeR & B Movie Soundtracks
Ukuqonda i-Heisenberg Incertainty Principle
Izinto Ezinhlanu Awaziyo NgeAfrika
Ndibhalela njani 'i-Simpsons' okanye iMat Groening?
IPlala Creamer Profile
Benza Bulls Buck kwi-Rodeo?
I Window ye-Oriel - Isisombululo seZakhiwo
Ukhuselo lweNcwadi yoLutsha lweComic
Iingxaki zeLizwi lokuphindaphinda ngee-Worksheets eziprintiweyo
Umehluko phakathi kwamaLibharari kunye nama-Conservatives
Biography kaArthur Miller
Yintoni uPhilly Soul?
Imiyalelo elula ye-DIY yokwenza iRain Charm
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi "Isibusiso" (ukuya kuNzakala, ukuPhoswa)
Ibhokisi yeebhokisi zeebhasi
IsiGaba esiPhakathi IsiNgesi IMizekeliso
I-Sex Scandal Iikhathuni
Ubume beFrench IsiGama kunye neNkcazo - Uphikisana nawe
Umxholo woMthetho woBulala abantu
Ngaphezulu kwama-45 weeMculo eziNinzi kakhulu
Iseluleko samahhala - Ukugcinwa kweNdlu yakho endala
Ukuhlaziywa kwe-Yamaha FZ6R ka-2009